गितार सिकारुका लागि १० टिप्सहरु | 10 Tips for Beginner Guitar Learner | First 10 Things Beginner Should Learn
10 Tips for Beginner Guitar Learner
by PROWIB May 13, 2019
हरेक गितार सिकारुहरुले यो १० टिप्स जान अत्यन्त जरुरि हुन्छ (First 10 Things Beginner Should Learn) । किनभने यो कुरा थाहा नभई कुनैपनि व्यक्त्तिले गितार सिक्न सक्दैन।
गितारको पार्ट्स (Guitar Anatomy)
गीतार कसरि समात्ने (How to HoldaGuitar)
गितारको पिक कसरि समात्ने (How to HoldaPick)
गितार ट्युन गर्न (How to TuneaGuitar)
गितारको तार मिलाउन (How to Re-stringaGuitar)
कर्ड र ट्याब को बारेमा जानकारी (How to Read Tabs and Chords)
रिदममा कसरि बजाउने (How to Strum in Rhythm)
ओपन कर्ड कसरि बजाउने (How to Play Open Chords)
पावर कर्ड कसरि बजाउने (How to Play Power Chords)
गीत संग कसरि बजाउने (How to Play Guitar Songs)
1. गितारको पार्ट्स (Guitar Anatomy)
यदि तपाइँ कुनै कुरा सिक्नु भन्दा पहिला त्यसको बारेमा राम्ररी जान्न जरुरि हुन्छ। जस्तै तपाइँ गाडी चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको ब्रेक, गियर, स्किलेटर, बटनहरुको राम्रो जानकारी हुनु पर्छ। गितारमा पनि यहि नियम लागु हुन्छ।
गितार बजाउनु भन्दा पहिला त्यसमा भएको पार्ट्सहरु के के हो? र के ले के काम गर्छ ? त्यसको बारेमा तल देखि माथि सम्म पुरा जानकारी हुनु पर्छ। फोटोमा देखाइएको जानकारीले तपाईलाई पुरा मद्दत गर्ने छ।
2. गितार कसरि समात्ने (How to HoldaGuitar)
कतिलाई लग्न सक्छ गितार समाउन के गाह्रो छ र ? तर यदि तपाइले गितारलाई सहि तरिकाले राखेर समात्नु भएन भने तपाई गितार सहि रुपमा बजाउन सक्नु हुन्न। त्यसको लागि तपाईले गितारको घाटी पट्टिको(Neck) भागमा बायाँ हात र त्यसको शरीर (Body Part) को साउण्ड होल (Sound Hole) मा दायाँ हातलाई राख्नु पर्छ। जसले गर्दा गितारबाट राम्रो ध्वनि (Tune) उत्पन्न हुन्छ।
यदि तपाई बायाँ हात चलाउनु हुन्छ भने तपाइँसंग Liftsided गितार छ भने त् सजिलो हुन्छ तर यदि छैन भने अरुनै गितारको तारलाई पुरै उल्टो बनाउने तलको माथि र माथिको तल पर्ने। र गितारको घाटी पट्टिको(Neck) भागमा दायाँ हात र त्यसको शरीर (Body Part) को साउण्ड होल (Sound Hole) मा बायाँ हातलाई राख्नु होला।
3. गितारको पिक कसरि समात्ने (How to HoldaPick)
यदि तपाई सिकारु हुनुहुन्छ भने पिक थाहा नहुन सक्छ। पिक भनेको गितार बजाउन प्रयोग गरिने प्लास्टिकबाट बनाइएको सानो बस्तु हो। पिक तपाईले गितार पसल वा बुकहरुको पसलमा सजिलै र सास्तो दाममा पाउनु हुनेछ।
यसलाई प्रयोग गर्न तपाईको Thum र first Finger or index (बुढी औला र चोर आउला) को बीचमा राखेर गितारको तारमा तल र माथि गर्दै हिर्काउनु पर्छ। यदि तपाई सिकारु हुनुहुन्छ भने पातलो पिक प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छु।
4. गितार ट्युन गर्न (How to TuneaGuitar)
गितार ट्युन गर्नु भनेको गितारको तार सहि तरिकाले मिलाउनु हो। जसको लागी गितारको तार माथि देखि तल (E, A, D, G, B, E) हुनु पर्छ। यदि तपाइँ गितार बजाउदै हुनुहुन्छ तर गितारको टियुन मिलेको छैन भने तापाइले जतिनै राम्रो बजाउने प्रयास गरेपनि सक्नु हुन्न किन भने गितारको टियुन नमिलाई कर्ड बजाउदा सुर मिल्दैन। त्यसैले गितार बजाउनु भन्दा पहिला गितार ट्युन गर्न अत्यन्तै जरुरि छ। गितार ट्युन गर्नका लागि विभिन मोबाइल एपहरु उपलब्ध छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर गितार ट्युन गर्न सक्नु हुने छ, हार्मोनियम सँग पनि मिलाउन सक्नु हुन्छ र The 5th Guitar Fret Technique प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नु हुनेछ।
5. गितारको तार मिलाउन वा फेर्न (How to Re-stringaGuitar)
गितारको ६ वटा तार हुन्छ (E, A, D, G, B, E) जसलाई सहि तरिकाले मिलाएर लगाउनु पर्छ। सबै भन्दा पहिला तपाईलाई तार पुरानो भएको थाहा पाउन जरुरि छ। यदि तार पुरानो वा रंग गएको र ट्युन भद्दा हुदै जान्छ, ट्युनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ तब तार पुरानो भएको बुझनु पर्छ। तपाइँहरुलाई म के सल्लाह दिन्छु भने गितारको तार फेर्दा अलि राम्रो क्वालिटीको प्रयोग गर्नुहोला जसको लागि नजिकैको गितार पसलमा गएर लिनु राम्रो हुन्छ।
6. कर्ड र ट्याब को बारेमा जानकारी (How to Read Tabs and Chords)
कर्ड र ट्याब(Guitar Chords and Tabs) को बारेमा जान्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले गितारको बर (Fret/bar), तार (String) र औलाहरुको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसपछि गितार कर्डको चार्ट हेरेर कुन औला कुन बारको कुन तारमा राख्ने तपाइले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
7. रिदममा कसरि बजाउने (How to Strum in Rhythm)
रिदम भनेको बिट हो। धेरै जसोलाई रिदममा स्ट्र्म (Strum or Strumming) गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गितार स्ट्र्म सिक्नका लागि लुप किन्ने या ड्रमहरुको बिटमा अभ्यास गर्ने। मोबाइलहरुमा पनि यस्तो बिट एपहरु पाइन्छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ।
8. ओपन कर्ड कसरि बजाउने (How to Play Open Chords)
ओपन कर्ड भनेको सामान्य कर्ड जसमा पुरै तारलाई समेट्नु पर्दैन। जस्तै A कर्ड मात्र तीन वटा तारलाई समेटे मात्र पुग्छ। धेरै जसो सुरुवाती सिकारुले यहि ओपन कार्ड सजिलै सिक्ने गर्छ। जब सिंगल ओपन कर्ड पूर्ण रुपले बजाउन सक्छ तब देस्रो ओपन कर्ड सिक्न सुरु गर्छ।
9. पावर कर्ड कसरि बजाउने (How to Play Power Chords)
पावर कर्डमा मुख्य दुई नोट कर्डको प्रयोग हुन्छ। यसलाई रुट कर्ड र 5th कर्ड भनिन्छ। यो कर्डहरु प्राय रक म्युजिकहरुमा प्रयोग हुन्छ। पावर कर्ड बजाउनका लागि मात्र २ वा ३ वटा औलाको प्रयोग हुन्छ।
10. गीत संग कसरि बजाउने (How to Play Guitar Songs)
एउटा राम्रो गीत छनोट गर्नुहोस्। जसमा कर्ड पनि अलि कम र स्ट्र्म पनि सजिलो होस् जसले गर्दा सिक्न सजिलो हुन्छ र एउटा सम्झना पनि रहन्छ कि सबै भन्दा पहिला सिकेको गीत भनेर।
यसलाई गीत बजाएर गितारमा अभ्यास गरिरहने। जब गीत सँग तालमेल मिल्न थाल्छ तब गीतको शब्द गुनगुनाउदै अभ्यास गर्ने।
=) यदि तपाइँहरुलाई यो लेखले केहि मद्दत गर्यो भने यसलाई सेयर गर्नुहोला
=) यदि तपाइँहरु सँग गितार सिक्नेहरुका लागि केहि नयाँ र रोचक सुझावहरु छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्नु होला।
How to Learn Guitar for Beginners | Tips for Beginner Guitar Player (नेपाली शब्दमा )
Tags: 10 Tips for Beginner Guitar Learner Blog guitar Guitar Lesson Guitar Tips and Tricks Guitar tips and tricks for beginner How to learn guitar for beginner